Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar
JIGJIGA - Madaxwaynaha dowlad degaanka Soomaalida, Mustafe Maxamad Cumar [Cagjar] ayaa sheegay in eedaha kaliya uu haatan xabsiga ugu jiro Cabdi Illey ay yihiin kuwii dhacay wixii ka dambeeyay markii ay ciidamad Federaalka Itoobiya ay qabsadeen magaalada Jigjiga.
Milateriga Itoobiya ayaa xarunta dowlad degaanka qabsaday bishii Agoosto ee sanadkaan 2018, taasi oo dhalisay dibad-baxyo waawayn oo rabashado watay, oo sababay dhimasho iyo dhaawac loogu geystay Itoobiyaan iyo Ajaaniib kale.
Cagjar oo wareysi siiyey laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa daboolka ka qaaday inuu ku dhaliilsan yahay dowlada arrinkaasi, isaga oo taasi ku daray inay "habooneyd" in lagu soo oogo Cabdi Illey "xadgudubyadii" uu ugeystay Shacabka Soomaalida.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan xubno kale, kuwaasoo uusan fahfaahin hadii ay ku jiraan mas'uuliyihiin haatan ku socoto baaris ku aadan dhibaatooyin ay ugeysteen Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee deriska la ah.
Mar la su'aallay inuu bidhaamiyo cidda u uxiran yahay Cabdi Illey ayuu afka ku balaariyay iinay tahay dowlada Federaalka Itoobiya, laakiin dacwadaha uu haatan xabsi ku yaala Addis Ababa ugu jiro aysan ahayn kuwa uu Soomaali ka galay.
"Cabdi Maxamuud wuxuu u xiran yahay dowlada Federaalka, laakiin eedaha uu hadda xabsiga ugu jiro waa kuwa heer Federaal ah, iyo xadugubyo uu qowmiyado kale ka galay, waana cabasho ka qabnaa taasi, sababta oo ah waxaa jirta tacadiyo uu shacabka degaanka ugeystay oo ay ugu horeyso 1,000 oo ruux oo aas wadareed loogu geystay [qaybo ka ah degaanka," ayuu yiri Cagjar.
Mar la waydiiyay Madaxwaynaha sababta wali aanan loo xukumin Cabdi Illey oo tiro dhowr jeer ah kasoo muuqday maxkamadda ayuu sheegay inay qayb ka tahay nidaamka hay'addaha cadaalada Itoobiya, kuwaasoo uu xusay inay raadinayaan caddeymo.
"Maxkamadda waxay leedahay wadado dheer, ma ahan in qofka lasoo qabto tobban maalin kadibna la xukumo, sida maxkamada cadaaadaladda aduunka, waxay uruur-saneysaa marqaatiyaal, dambiyadda loo haysto Cabdi Illey waa kuwa culus, marka wali lama gaarin waqtigii la oran lahaa, maxaa loo xukumi la'yahay," ayuu hadalkiisa daba dhigay Mustafa.
Hadalka Madaxwaynaha ayaa kusoo aadaya xili todobaadkii hore markii Shanaad Cabdi Illey lasoo taagay maxkamad, halkaasi oo Boolisku ka sheegeen inuu isku dayey ka bax-sashadda xabsiga oo ku xiran yahay, inkasta oo uusan ka jawaabin.
- Magacaabista Wasiiradda Federaalka -
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay Gollahiisa Wasiiradda, kuwaasi oo ka kooban 20, oo ah 10 kamid ah ay yihiin Haween, halka 10-ka kale waa Rag, taasi oo ka dhigan inay 50% yihiin ay Dumar yihiin, taasi oo ah markii ugu horeysay.
Goboladda Soomaalida xukuumadda oo markii hore ku lahaa Federaalka labo wasiir ayaa waxay haatan ku leeyihiin Hal wasiir, waxaana loo magacaabay Axmed Shide, kaasi oo noqday Wasiirka Maaliyadda, oo kamid ah Wasaaradaha ugu muhiimsan.
Tani oo noqoneysa markii ugu horeysay ayaa Madaxwayne Cagjar oo soo hadal-qaaday wuxuu muujiyay sida uu ugu farax-san yihiin, isaga oo hoosta ka xariiqay inay qorshaha ugu jirto inay bataan wasiiradda Federaalka ee uu gobolka ku leeyahay.
"Wasaaradda aan helnay waa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan, waana markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah loo magacaabo. Qorshaha way noogu jirtaa inay dadka Soomaaliyeed ay helaan waxay uqalmaan," ayuu hadalkiisa kusii daray Madaxwaynaha.
- Cagjar oo u hanjabay mas'uuliyiinta maamulkii Cabdi Illay -
Isagoo sii hadlaya ayuu Cagjar cod dheer ku sheegay in cid walba oo ka tirsaneyd maamulkii Cabdi Illey, kuwaasi oo ku lug-lahaa tacadiyadii ka dhacay degaanka ay sharciga horgayn doonan, isaga oo ku nuux-nuux saday inay qaarkood baxsadeen.
"Waxaa jira kuwa cabaadaya oo oranaya dhibaatooyinkii nasoo maray ina dhaafo yaan lasoo qaadin. Waxaan qaadanay go'aan ah in qof walba tacadi geystay aan gacan bir ah ku qabano. Ma rabno inaan ku xad-gudubno qofka, oo tuhun ama shaki loo xiro," ayuu yiri Cagjar.
Madaxwaynaha dowlad degaanka Soomaalida ayaa tibaaxay inay jiraan shaqsiyaad olalaha ay ku beegsanayaan kuwa xadgudubyadda geystay, kuwaasi oo uu u sheegay in aysan ujoojin doonin, isaga oo ku tilmaamay inay kuwa ku lug lahaa dhibaatooyinkaasi dhacay.
- Colaadda Soomaalida iyo Oromada -
Gabagabadii, Madaxwaynaha dowlad degaanka Soomaalida ayaa sheegay in saxaafadda ay hurineyso colaadda Soomaalida iyo Oromadda, kuwaasi oo dagaalo meelo kala duwan ka dhacay ku dhex-maray, isagaoo tilamaamay in aanu jirin xurguf labada dhinac u dhaxaysay.
"Ma jirto colaada labada qowmiyadood udhaxeysay, waxa abuuraya waa saxaaafada Kenya iyo tan Soomaalida oo la kireystay. Illaa iyo Muqdisho, Boosaaso ayey ka jirtaa naceybka Oromada, waan arki kartaa dhibaatada ay leedahay been abuurka, ma jirto wax colaada ah ka dhaxeysay," ayuu hadalkiisa kusoo xiray Madaxwaynaha.